झापा-सामान्तय दशैंमा फूलपातीको दिनदेखि देशै भर मासुको खपत बढ्छ । तर, झापामा खसीको मूल्य वृद्धिले मासुको अभाव सिर्जना भएको छ । खसीको मूल्य अत्याधिक बढेपछि झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ५स्थित कृषिथोक बजारमा सञ्चालित मासु पसल बन्द हुन थालेका छन् ।
जिल्ला मासु व्यवसायी संघ झापाका सदस्य गोविन्द तिम्सिना कृषिथोक बजारमा मासु पसल गर्छन् । यस वर्ष बजारमा खसीको मूल्य बढेकाले पसल बन्द गर्नु परेको तिम्सिना सुनाउँछन् । “गत वर्षको दशैंमा ६५ वटा खसीको मासु बिक्री गरेको थिएँ” तिम्सिनाले भने, “यस वर्ष १ वटा पनि खसी छैन ।” दशैंको समयमा विगतका वर्षमा प्रतिदिन ५ वटासम्म खसीको मासु बेच्ने तिम्सिनाले सुनाए ।
स्थानीय व्यापारीले भन्दा काठमाडौंका व्यापारीले महंगो मूल्यमा खसी किन्ने गरेकाले आफूले महंगो मूल्य हालेर खसी किन्नै नसकेको शेखले बताए । “म सँग अहिले ३ वटा खसी स्टकमा छन्” शेखले भने, “हामीले १५ हजार रुपैयाँ लगाएर किन्ने खसी काठमाडौँका व्यापारीले २० हजारसम्म हाल्छन्, काठमाडौँमा मासुको दाम धेरै छ उनीहरुलाई घाटा हुँदैन, हामीले घाटा वेहोर्नु पर्छ ।”
मासु व्यावसायी संघ झापाले गत भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासुको मूल्यमा प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर ८ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । अहिले कृषिथोक बजारमा खसीको मासु ८५० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भइरहेको छ । मूल्य वृद्धि भए पनि व्यावसायी घाटामा जाने शेखको भनाई छ । ‘१८ किलोको खशीलाई १५ हजार रुपैयाँ लगाएर किन्नु पर्ने अवस्था छ, हामीले किन्दा प्रतिकिलो ७ सय ५० रुपैयाँले किन्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र लगानी उठ्छ, नाफा खोइ’ उनले प्रश्न गरे, ‘स्टाफलाई कुन पैसा दिनु ? आफ्नो पारीश्रमिक कसरी उठाउनु ? ।’
गत वर्षको दशैंमा ३० वटा खसीको मासु बेचेकी सबिना भट्टराई यो वर्ष पसल बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछिन् । ‘यो वर्ष खसी किन्न, व्यापार गर्न सकिएला जस्तो छैन’ उनले भनिन्, ‘खसीको महंगी बढेपछि पसल बन्द गरेर घरमा नै बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।’ झापामा खसी पालन कमै छ । यहाँका बजारमा इलामको फिक्कल पश्चिमका स्थानबाट खसी ल्याइन्छ । तर, इलाम र झापाको बजारमा मासुको मूल्य सम्मान रहेकाले पनि आयातमा समस्या हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । फूलपाती आउन एक दिनमात्र बाँकी रहँदा भट्टराईसँग एउटा पनि खसी छैन ।
खसी व्यापारीसम्म आइपुग्दा विचौलियाको हावी हुने गरेकाले पनि मूल्य वृद्धि भएको मासु व्यापारी बताउँछन् । “इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङका व्यापारीले किसानबाट खसी किन्ने गर्छन् । ति स्थानीय व्यापारीले झापाका व्यापारीलाई खसी बेच्छन् । र उनीहरुवाट मात्र हामीले खसी किन्ने गरेका छौँ, यसले गर्दा पनि खसीको मूल्य धेरै पर्न जान्छ ।” कृषिथोककी व्यापारी सुकमाया राजवंशीले भनिन् । अहिले कृषिथोक बजार भित्र सञ्चालित ११ वटै खसीको मासु पसल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।